Dacwaddii Badda ee u dhaxaasay Soomaaliya iyo Kenya oo mar kale dib uu Bilaabaneysa. – Xeernews24
Dacwaddii Badda ee u dhaxaasay Soomaaliya iyo Kenya oo mar kale dib uu Bilaabaneysa.
Xeer ilaaliyaha Guud ee Dalka Kenya Githu Muigai,ayaa u sheegay Wargeyska Sunday Nation ee ka soo baxa Kenya in jawaabta ay bixinayaan ay noqon doonto saddex qeybood oo kala ah; warbixin la xidhiidha xaqiijinta lahaanshaha biyaha ay ku doodayaan,warbixin la xidhiidha dhinaca sharciga iyo midda ugu dambeysa oo ah in wakhtiga loogu talagalay in ay ku gudbiyaan.
Wakhti la siiyay labada dal ayey dood dheer kaddib Maxkamadda dhegeysatay dooddooda waxaana 2dii February Sanadkan Maxkamaddu go’aamisay in ay qaadeyso kiiskaas ciddii muran ka qabtana ay tahay in ay soo gudbiso cabashadeeda taas oo hadda Kenya looga fadhiyo.
Doorashada Garsoorayaasha cusub ee Maxkamadda ICJ ayaa dhawaan dhaceysa waxaana uu xilka ka dhamaanayaa Joyce Aluoch oo u dhashay dalka Kenya iyo Sanji Mmasenono Monageng.oo u dhashay Botswana,waxaana ay xilka wareejin doonaan 10ka March 2018-ka.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/09/badda-somalia1.jpg 407 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-12-03 11:36:492017-12-03 11:36:49Dacwaddii Badda ee u dhaxaasay Soomaaliya iyo Kenya oo mar kale dib uu Bilaabaneysa.
Maxaadka Ogtahay Jasiiradaha ku Xeeran Magaaladda Saylac? Cali Cabdalla Saalax oo marku dalkiise burburiye Wadahadalo ogolaaday isbahaysiga...